उपसभामुखलाई सभामुख बनाउने व्यवस्था छैन- देव गुरुङ – Radiokathmandu उपसभामुखलाई सभामुख बनाउने व्यवस्था छैन- देव गुरुङ – Radiokathmandu
उपसभामुखलाई सभामुख बनाउने व्यवस्था छैन- देव गुरुङ
Posted on January 13, 2020 January 13, 2020 /7महिना अगाडी / 265 Viewed
२८ पुस, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उपसभामुखको हैसियतमा रहनुभएका डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे सभामुखको उम्मेद्धवार नै बन्न नपाउने बताएका छन ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै नेता गुरुङले उपसभामुखलाई सभामुख बनाउने व्यवस्था नरहेको बताए ।
उपसभामुख पदमा रहिरहेर सभामुखमा आफ्नो उम्मेद्धवारी दिन नमिल्ने भन्दै उनले उम्मेद्धवार हुन चाहेको भए उपसभामुखबाट अनिवार्य रुपमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए । गुरुङले अहिले सभामुख पद रिक्त रहेकोले त्यसको लागि निर्वाचन आवश्यक रहेको बताए । उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न नेकपाले आग्रह गरेको पनि उनले बताए ।
उनले संवैधानिक पदमा बसेर बार्गेनिङ गर्ने नैतिकता कसैलाई पनि नहुने र कम्युनिष्ट पार्टीमा त झनै त्यो कुरा स्विकार्य नहुने बताए । उनले उपसभामुख यथावत रहेको अवस्थामा नेकपाले सभामुखमा उम्मेद्धवारी दिन नपाउने पनि बताए ।